၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးလက်ပ်တော့ပ်များ၊ တက်ဘလက်များနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြစ်သည် Gadget သတင်း
ဤရွေ့ကားပြုပြင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံး laptop များ, တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖြစ်ကြသည်
ဟိုဆေး Alfocea | | NOTICIAS
ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်၊ တက်ဘလက်အသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ပ်တော့ပ်အသစ်ကိုဝယ်သောအခါ၎င်းသည်ဖန်သားပြင်၏အရည်အသွေး၊ စွမ်းအား၊ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်၊ ဘက်ထရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ၄ င်း၏ဒီဇိုင်းစသည့်ရှုထောင့်များကိုအမြဲတမ်းသတိပြုမိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အခြေခံကျသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သောပြုပြင်နိုင်သည့်အညွှန်းကိုအာရုံမထားကြပါ။ အာမခံချက်မပါသည့်ပြproblemနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး“ အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ဤစက်ပြင်ရန်ထက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကို repairability ၏အရေးပါမှုကိုပိုမိုသိရှိစေရန်နှင့် Greenpeace ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူ။ စျေးပေါသည့်ကိရိယာများကိုပြုလုပ်မည့်အစားပစ္စည်းအသစ်များကိုမကြာခဏ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသောထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် iFixit အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်စတင်ခြင်းတွင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးရွားဆုံးသောမိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်လက်တော့ပ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ.
2 ပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ရန်အသေးဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံး ...
ဒါဟာမကြာခဏ၏ပြောပြီဖြစ်ပါတယ် "စီစဉ်ထားသောခေတ်နောက်ကျခြင်း"ထုတ်လုပ်သူများစွာအသုံးပြုသောခန့်မှန်းခြေကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရက်နှင့်တူသောအရာတစ်ခုခုသည် ၄ ​​င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲအသစ်တစ်ခုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်။
ကွန်ပြူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်နောက်ထပ်ကောင်းသောနည်းဗျူဟာသည်မွမ်းမံခြင်းများဖြစ်သည်။ မကြာခဏထုတ်လုပ်သူ operating system ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများကိုမထောက်ပံ့တော့ပါဤနည်းအားဖြင့်အဟောင်းသုံးစက်များပိုင်ရှင်များသည်အကောင်းဆုံးနှင့်ခေတ်မီပစ္စည်းအသစ်များမရှိဘဲကျန်ရှိတော့သဖြင့်များစွာသောဖြစ်ရပ်များတွင်မလိုအပ်ပါကဆိပ်ကမ်းအသစ်များထပ်မံရရှိရန်တွန်းအားပေးနေသည်။
စားသုံးသူများအားမိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်လက်တော့ပ်များကိုသူတို့လိုချင်သည်ထက်ပိုမိုစောစီးစွာအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမေးခွန်းထုတ်စရာဤပုံသေနည်းသည်အခြားတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည် ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲစေ.
များစွာသောထုတ်လုပ်သူများမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် ကွဲပြားခြားနားသောအတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအတူတကွဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့နည်းစနစ်များ အသုံးပြုသူသည် extensions များကိုမပြုလုပ်နိူင်ပါကသိုလှောင်မှုပိုလိုလျှင်သိုမဟုတ်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့သို့သို့သို့သို့ရာတွင်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သို့သို့သို့သို့ရာတွင်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သို။ သော်သိုမဟုတ်သို။
သို့သော် ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်မှာပြaနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့သွားရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်ယုတ္တိနည်းကျဖြင့် ကိရိယာတစ်ခုကိုပြုပြင်ရန်ခက်ခဲလေပြုပြင်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်လေလေဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စများပင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူအနေဖြင့်ပစ္စည်းအသစ်များကိုအသစ်ထပ်မံဝယ်ယူရန်၊ အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူကကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပြီးသုံးစွဲသူသည် ဆက်လက်၍ ပျော်မွေ့စွာနေနိုင်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်သုံးစွဲရမည်။
ဤအခြေအနေကိုစားသုံးသူများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များကနှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပြီးကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနေသောကြောင့် iFixit နှင့် Greenpeace တို့၏မဟာမိတ်များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသောတက်ဘလက်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်များကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်.
ဒီအခြေအနေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးဟာအင်အားစုတွေကိုပူးပေါင်းပြီးဖန်တီးခဲ့တယ် website အသစ် ငါတို့တတ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံး repairability အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများနေသောစစ်ဆေးပါထို့ကြောင့်စျေးဝယ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။
ကကျိန်းဝပ်သောအပေါ်ရဝုဏ် ပြန်လည်စဉ်းစားပါ (ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်၏အမည်ဖြစ်သည်) သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ "လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ ၀ ယ်တဲ့အခါသူတို့ကနှစ်နှစ်လောက်ပဲကြာပြီးသူတို့ကပစ္စည်းအသစ်တွေ ၀ ယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုငါတို့ဘာကြောင့်လက်ခံတာလဲ။ ".
ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သောထုတ်ကုန်များ၏ဤအဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းထားသည် အမျိုးအစားသုံးမျိုး (လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်လက်တော့ပ်များ)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထွေထွေအဆင့်ကိုကြည့်။ ဖြစ်စေ၊ အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောသို့မဟုတ်နိမ့်ကျသောပြုပြင်နိုင်သည့်အညွှန်းကိန်းဖြင့်ဖြစ်စေရလဒ်များကိုမှာယူနိုင်သည်။
အခု အမြင့်ဆုံးပြုပြင်နိုင်သောအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
အမြင့်ဆုံးပြုပြင်နိုင်သည့်အညွှန်းကိန်း (10/10) ရှိသောစမတ်ဖုန်းသည် Fairphone2ဖြစ်သည်။
အမြင့်ဆုံးပြုပြင်နိုင်သည့်အညွှန်းကိန်း (10/10) ဖြင့်တက်ဘလက်သည် HP Elite x2 1012 G1 ဖြစ်သည်။
အမြင့်ဆုံးပြုပြင်နိုင်သည့်အညွှန်းကိန်း (10/10) ရှိသော Laptop သည် Dell Latitude E5270 ဖြစ်သည်
ဆိုးကျိုးများအားဖြင့်, နိမ့် repairability အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
မိုဘိုင်းကဏ္Inတွင် ၁၀ ယောက်လျှင် ၃ ခုရနိုင်သော Samsung ၏ Galaxy S3 နှင့် S10 Edge
တက်ဘလက်အမျိုးအစားတွင် ၁၀ ယောက်လျှင် ၁ ခုရမှတ်ရှိပြီး Microsoft Surface Pro 1 ။
မှတ်စုစာအုပ်အမျိုးအစားတွင် ၁၀ ခုအနက် ၁ ခု၊ Apple ၏ 1 MacBook Retina၊ Apple ၏ ၁၃″ MacBook Pro နှင့် Microsoft ၏ Surface Book တို့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » ဤရွေ့ကားပြုပြင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံး laptop များ, တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖြစ်ကြသည်
Gema လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
အိုက် !!! ကွန်ပျူတာနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်းကိုတက်ရောက်သူများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုနုတ်ဆက်ပါတယ်။ ??? #Ahorasondesechables
Gema Lopez အားပြန်ပြောပါ
စျေးပေါသော Laptop ဟုသူကပြောသည်
ငါ့အတွက်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အခက်ခဲဆုံးသောစမတ်ဖုန်းများနှင့်လက်တော့ပ်များမှာ Apple၊ iPhone နှင့် Macs များဖြစ်သည်။
Newsill မှ Renshi Guang, ငါတို့ကဒီ mouse ကိုဂိမ်းကစားသူတွေအတွက်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်